Ny Media Sosialy No Nampandresy Ilay Kandida Tsy Miankina Tao Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2014 2:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, čeština , Español, 日本語, English
Sary fampielezan-kevitr'i Wen-je tamin'ny fifidianana. Tao amin'ny pejy Facebook-n'i Ko
Nivoaka mpandresy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tao an-tanànan'i Taipei ilay kandida tsy miankina Ko Wen-je, nilaza izy fa manana ny media sosialy hisaorana.
Nandatsa-bato i Taiwan tamin'ny 29 Novambra hifidianana governora sy ben'ny tanàna. Manome lanja ny rafitra ifanandrinan'ny antoko roa ny tontolon'ny politika ao amin'ny firenena, izay anjakan'ny antokon'ny fitondrana ao Kuomintang (KMT) sy ny Antoko Demaokratika Progresista (DPP). Saingy nahavita nahazo vato 853 983 na 57,16 isan-jaton'ny vato i Ko, mpitsabo ny asany, fandresena goavana raha oharina amin'ny 40,82 isan-jato azon'ny mpifanandrina goavana aminy, Sean Lien, tohanan'ny antokon'ny fitondrana Kuomintang.
Tsy tahaka ny fampielezan-kevi-pifidianan'ireo antoko politika mahazatra, izay mandany volabe amin'ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra goavana ny azy, niankina tanteraka tamin'ny media sosialy i Dr. Ko mba hanaparitaka ny hafany. Nividy fandaharana tamin'ny fahitalavitra hanaovana dokambarotra tokana monja izy, ary nalefa tao amin'ny sehatra media sosialy ny ambin'ny fampielezan-keviny.
Ankoatra izany, nampanantena hanatanteraka ireo hevitra voaangon'ny ekipan'ny fampielezan-keviny avy amin'ireo mpisera media sosialy izy izay tafiditra ao anatin'ny politikan'ny tanànan'i Taipei raha mandresy amin'ny fifidianana. Maro ireo nankasitraka ny fahavitrihany tao amin'ny media sosialy tamin'ny fampandraisana anjaran'ireo tanora marobe mba hifidy.
Tamin'ny kabarim-panekena nataon'ny Dr. Kao, nankasitrahany ny tanjaky ny media sosialy:
Olom-pirenena tsotra aho, ary hanohy hihaino ireo feo avy amin'ny olon-tsotra raha vao manomboka ny asako ao amin'ny governemantan'i Taipei. Mitovy amin'ny fihanaky ny aterineto ny fahefan'ny olona ifotony. Nitofotra tanteraka tamin'ny aterineto ny fampielezan-kevitra rehetra – fanomezana antserasera, fampiroboroboana foto-kevitra, fanentanana amin'ny hetsika. Nanomboka tamin'ny hetsika Tafika T-shirt Fotsy) hatramin'ny Hetsika VoninkazoTanamasoandro, nanangana fomba vaovao hoan'ny politika ao Taiwan ireo hetsiky ny olom-pirenena.
Hetsika malaza mitaky ny fanadihadiana ara-miaramila tamin'ny fahafatean'i Hung Chung-chiu, tanora miaramila namoy ny ainy tampoka tamin'ny 4 Jolay 2013 tamin'izy notanana nandritra ny asa fanompoam-pirenena ny hetsika Tafiky ny T-shirt Fotsy. Fanentanana hanoherana ireo fifampiraharahana tsy mangaraharaha mikasika ny fifanekena ara-barotra miaraka amin'i Shina koa ny hetsika Voninkazo Tanamasoandro. Mirona tanteraka tamin'ny media sosialy ireo hetsika roa ireo.
Nifantoka tamin'ny kolontsaina aterineto ny fampilezan-kevitry Dr. Ko ary nanaraka ny fitarihan-dalan'ny fitsipika sy hasina tahaka ny fifarimbonana hitondra fahendrena, mangarahara ary fisokafana. Ohatra, namoaka fanambarana ny habaka fampielezan-keviny tamin'ny 11 Novambra, roa herinandro talohan'ny fifidianana, fa hijanona tsy handray fanomezana hoan'ny fampielezan-kevitra intsony izy ireo raha vao ampy ny vola handoavana ireo fandaniana ilaina amin'ny fampielezan-kevitra.
Andro vitsy taorian'ny fifidianana, namoaka manontolo ireo faktioran'ny fandaniana bitika indrindra tamin'ny fampielezan-kevitra ny ekipan'ny fampielezan-keviny. Niteraka andiana fanehoan-kevitra antserasera ny iray tamin'izany taratasy izany – NT$80 (eo amin'ny 3 dolara Amerikana eo) no natokana nividianana tongolo gasy tamin'ny 5 septambra.
Namazivazy mikasika izany fandaniana izany ilay mpisera Facebook Chang Shiu-hwen:
Mety hoe avy amina vavy antitra tao amin'ny tsenan'ny tantsaha izany tongolo gasy izany, saingy nony farany, tsy maintsy novidian’ [izy ireo]? Izany tokoa ve?
Ohatra hafa ihany koa ny fidiran'ny vadin'i Ko an-tsehatra. Ramatoa Pegger Ko izay mavitrika tanteraka amin'ny fanohanana ny vadiny tao amin'ny pejy Facebook-ny misokatra hoan'ny rehetra, izay manana mpanjohy mihoatra ny 200 000.
Nandritra ny fifidianana tao an-toerana tamin'ny herinandro lasa, izay nomena anarana ho fifidianana 9 in-1 maka, nifidy governora, ben'ny tanàna, mpanolontsainan'ny tanàna sy filohan'ny tanàna kely ary lehibem-pokontany ny vahoaka. Mampiseho sahady izay ho endriky ny fifidianana filoham-pirenena hoavy hotontosaina amin'ny taona 2016 ity fifidianana ity. Ny antokon'ny fitondrana Kuomintang, izay nahazo seza 14 tamin'ireo 22 teo aloha, dia nanary ny atsasaky ny fiadidiany ary nahazo toerana enina monja, raha toa kosa ka nahazo toerana 13 ny Antoko Progresista Demaokratika.
Nilaza ireo mpanao fanadihadiana sasany fa hisy fiantraikany amin'ny fihetsiky ny mpifidy sy ny kolontsaina politika ao amin'ny firenena ny fahombiazan'i Ko tamin'ny fibatana ny fandresena tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tao andrenivohitra amin'ny maha-kandida tsy miankina azy.